na admin on 20-06-30
Mhoro, munhu wese.we ikozvino pano paruzhinji chigadzirwa chedu chakapfuura: Ocean Rocking Horse. yedu mukana, yakachengeteka asi inozivikanwa nevanovhunza-vanotsvaga, vana vanogona kusvetuka kubva pane mumwe kuenda kune mumwe, mhando yayo yakanaka kwazvo, yakagadzirwa ne PE. ndinofunga ichave yakakurumbira munyika yako. Kana iwe uchida kuziva zvimwe zvakawanda, iwe unogona ...
Hauzive maitiro ekushandisa vana vemitambo yekutamba? Iri idambudziko rakatarisana nevazhinji vatengi vachangopinda mubhizinesi. Kune akawanda emabhizimusi emhinduro dzevatengi zvisina kunaka sezvavanofunga. Muchokwadi, iyi haisi nyaya yemidziyo. Kana tikasarudza maneja akanaka ..
Kuwirirana Pakati Pakati peV ekunze Vana Chekushandisa uye Nezvakatipoteredza
Vana vakaita sechipo, vanofanirwa kunge vasiri-matoyi, dhizaini inonakidza inogona kuunza mufaro usingaperi kumwana. Midziyo yevatambi yevana Zvimwe zvinonakidza zvekudyidzana uye zvinonakidza zvekutamba zvevana zvinogona kuisa njodzi kuvana. Gore rega rega, vana vanopfuura zviuru zana ...
1. Zera reboka reNaughty Fort Paradise rinofanira kutsunga. Icho chakanaka 0-6 gore rebasa rechikoro, kana kungopinda kambasi. 2. Iyo nharaunda yeNaughty Fort Paradise inoonekwawo seyakanaka. Kana iyo iri diki, inogona kukanganisa zvinetso zvebhizimisi zvenguva refu. Inofanira kunyatso ongorora ...